Soo dejisan WinNc 9.7 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: WinNc
WinNc – Maamule fayl badan oo u shaqeeya kaas oo kuu ogolaanaya inaad qabato shaqooyin badan waqti yar. Nidaamku wuxuu qaban karaa dhammaan hawlaha asaasiga ah ee maamulaha faylka sida nuqul, guurid, tirtirid, foorarsado, samir iyo abuuro xiriiryo. WinNc waxay ku imaaneysaa qaab-dhismeedka labadaba kaas oo hagaajinaya waxqabadka guud ee shaqada iyo fududeynaya ururada faylasha. Software wuxuu taageersan yahay midabada macquulka ah si loo go’aamiyo faylalka faylka oo kuu ogolaanaya inaad ogaatid feylasha kuwaas oo si firfircoon loo isticmaalo, iyo midkale marmar. WinNc waxay si fudud u heli kartaa faylasha, gubashada CDs, isku dhejinta faylasha, waxay furtaa faylasha, waxay eegaysaa faylasha sawirada noocyada kala duwan, iwm. WinNc waxay ka kooban tahay tiro badan oo kala duwan oo farsamaynaya iyo goobaha bixiya xorriyadda isticmaalka faylasha iyo u oggolow inaad bedesho qaybaha kala duwan ee software ka dib markaad door bidayso.
Midabada macquulka ah si loo ogaado falalka faylka
Macmiilka dhismaha ee FTP
Muuqaal faylasha sawir leh
Muujinta macluumaadka nidaamka
La qabsashada dhacdooyinka badan ee software
Soo dejisan WinNc
Faallo ku saabsan WinNc
WinNc Xirfadaha la xiriira